बामदेव चुनाव लड्न सुरिनुको यस्तो छ कारण
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सचिवालयका सदस्य बामदेव गौतम कर्णाली प्रदेशको डोल्पा जिल्लाबाट बहालवाला सांसदलाई राजीनामा गराएर उपनिर्वाचन लडने बिषयले अहिले राजनीतिक बजार तातेको छ । एकीकृत एमालेको उपमहासचिब, एमालेबाट बिभाजन भई बनेको नेकपा मालेको शक्तिशाली महासचिब, उपप्रधानसहित पटक–पटक गृहमन्त्री र केही समय जलश्रोत मन्त्री, पूर्व एमाले र अहिले नेकपाका बरिष्ठ सो सरहकै पदमा आसिन नेता गौतम किन संसदमा आउन चाहिरहेका छन भन्ने प्रश्न अहिले झन पेचिलो बन्दै गईरहेको छ ।
धेरैलाई लागेको थियो गत निर्वाचनमा बर्दियाबाट अप्रत्यासित पराजित भोगेपछि अब उनी संगठन निमार्णमा लागेर पार्टी नेतृत्वमा धावा बोल्न लाग्नेछन । तर स्थिति पुर्वानुमान अनुसार अगाडि बढिरहेको छैन । नेता गौतमले जसरी पनि संघीय संसदमा छिर्ने योजनाकासाथ पासा फ्याक्दैे नेकपाको शक्तिशाली ९ सदस्यीय सचिवालयमा डोल्पाबाट निर्वाचन जितेर पर्यटन राज्यमन्त्री बनेका सांसद धनबहादुर बूढालाई राजीनामा गराएर त्यहाँबाट आफु उपनिर्वाचन लडने मौखिक प्रस्ताव दर्ता गराईसकेका छन । भलै, सचिवालयले यसमा कुनै निर्णय भने गरिसकेको छैन । गौतम किन निवार्चन लडन चाहिरहेका छन् त ? यस बारेमा लेखाजोखा गरौं ।
जानकारहरुका अनुसार नेता गौतम चरम महत्वकांक्षा बोकेका राजनीतिक व्यक्ति हुन । यद्यपी प्रष्ट बक्ता, निर्भिकता तथा चलायमानता नेता गौतमको चरित्रमा पर्छ । आफनो महत्वकांक्षा पुरा गर्नका लागि पार्टी नै बिभाजन गर्नपछि नपरेको दर्दनाक इतिहास बामदेबका नाममा अंकित छ । त्यसो त गौतम राजनीतिमा ‘पावर र पैसा’ राम्ररी बुझेका नेतामा पर्दछन । महाकाली सन्धिप्रकरणमा राष्ट्रियताको बिषय उठाएर एमाले बिभाजन गरेका गौतमले पार्टी बिभाजनका सहयात्री सीपी मैनालीलाई नै धोका दिएर २०५८ मा माले पार्टी एमालेमा बिलय गराएको जवाफ आजसम्म दिएका छैनन । नेपाली राजनीतिमा स्थापित गौतमलाई जीबनको उत्तार्धमा एक पटक प्रधानमन्त्री हुने भित्री इच्छा जागेको छ । सोही इच्छा पूरा गर्न उनी बिवादका बीच पनि बर्दिया बाट डोल्पा उक्लन चाहान्छन्
बामदेवलाई चुनाव लडाउन प्रचण्ड रणनीतिले पनि भुमिका खेलेको जानकारहरु बताउँछन । पूर्व एमाले भित्र अन्तर्दन्द्ध चलाएर पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी आलीलाई साईजमा ल्याउन अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको रणनीति छ । पूर्व एमालेमा पूर्व माआवादी भन्दा बढी शक्तिकेन्द्र छन । माधब नेपाल, झलनाथ खनाल शक्तिकेन्द्र रहेको अवस्थामा बामदेवलाई संसदमा ल्याउन सके प्रधानमन्त्री ओलीलाई सबैभन्दा बढी तनाव दिनसक्न शक्तिकेन्द्रमा नेता गौतम उदाउन सक्छन । गौतम संसदमा आए प्रधानमन्त्री आफुलाई दिनुपर्ने माग राखेर उनले ओलीसंग अन्तर्दन्द्ध चर्काउने र त्यसको फाईदा आफुलाई पुग्ुनेमा प्रचण्ड ढुक्क छन । यसमा अप्रत्यासित रुपमा नेकपाको राजनीतिमा उदाएका महासचिव बिष्णु पौडेलले अहिले नेता गौतमलाई ‘सोडा’ हाल्ने गरेको जानकार स्रोतको दाबी छ । प्रचण्डकै प्रस्तावमा महासचिब भएका पौडेल र गौतमको साईनो अहिले राजनीतिक रुपमामात्र होईन, भैंसेपाटीमा छिमेकी भएसंगै व्यापारिक रुपमासमेत झांगिएको बताईन्छ । बामदेबलाई संसदमा ल्याउन सके पूर्व एमालेमा प्रधानमन्त्री ओली भर्सेस बामदेवको भिडन्त चल्ने र त्यसबाट आफुलाई प्रधानमन्त्री हुन बाटो खुल्ने प्रचण्डको बुझाई छ ।
दोहोरो खेलमा बूढा
सुर्य चिन्हमा डोल्पाबाट दुई पटक चुनाव जितेका बूढा पूर्व पञ्चहरुको पार्टी राप्रपाको स्कुलिङबाट हुर्किएका राजनीतिक प्राणी हुन । त्यसमाथि राजनीति संगै व्यापार राज्यमन्त्री बूढाको अर्को पेशा हो । त्यसैले उनले राजीनामा प्रकरणमा नाफा घाटा दुवै हेरिरहेका छन । गौतमकै कृपाले डोल्पामा सांसदको टिकट पाएको र चुनाव जितेपछि पर्यटन राज्यमन्त्री पनि बनेकाले उनले गौतमलाई मैदान खाली गरिदिन सक्छन । किनभने बर्दियाबाट चुनाव हारेका गौतमलाई मल्हम लगाइदिन नै प्रधानमन्त्री ओलीले बूढालाई राज्यमन्त्री बनाइदिएकोे एमाले भित्रैका पनि कमैलाई मात्र थाहा छ । डोल्पाबाट निर्वाचन जितेर काठमाडौं आए लगत्तै बूढा गौतमलाइ सान्त्वना दिन गौतम निवास भैसेपाटी पुगेका थिए । त्यसक्रममा गौतमले चुनाव हार्दा आफुलाई दुःख लागेकोले चाहेमा आफुले कुनैपनि बेला ठाउँ खाली गरिदिने बचन दिएका थिए । तर यसका लागि मन्त्री बनाइदिनुपर्ने शर्त थियो बूढाको । त्यही योजनाअनुसार बूढाका लागि नेता गौतमले फुल मन्त्रीको माग पनि राखेका थिए । तर प्रधानमन्त्री ओलीले गौतम गुटमा पनि रहेका रबिन्द्र अधिकारीलाई मन्त्रालय दिएर बूढालाई राज्यमन्त्रीमा थन्काए ।
पूर्व सहमतिअनुसार पछिल्ला दिनहरुमा बूढाले राजीनामा दिनुपर्ने माग गौतम पक्षबाट उठयो । बूढाले आफुले राजीनामा दिने तर त्यसका लागि पार्टी सचिवालयबाट निर्णय हुनुपर्ने ‘अत्तो’ थापे । त्यसपछि गौतम आफैंले प्रस्ताव सचिवालयमा लगेका थिए । सचिवालयबाट यस बारेमा कुनै निर्णय नभएपछि दवाब बढेर हुनसक्छ, बूढा जिल्लामा जनताको भावना बुझ्न भन्दै डोल्पा गए । बूढा डोल्पा जानुअघि राजधानीमै एकदर्जन भन्दा बढि डोल्पा पूर्व एमालेका युबाहरुले बागबजारको एउटा होटलमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर राजीनामा दिन नहुने धारणा सार्वजनिक भैसकेको थियो । त्यसपछि म जनताको चित्त बुझाएर आउँछु भन्दै डोल्पा हानिएका बूढा आफनो राजीनामा जनताबाट अस्वीकृत भएको सन्देश बोकेर काठमाडौं फर्किएका छन ।
धेरैलाई थाहा छैन, नेता गौतमसंग राज्यमन्त्री बूढाको सम्वन्ध गहिरो छ । त्यसैले त बूढाले गौतमलाई ‘बा’ भन्ने गर्दछन । यो सम्वन्ध राज्यमन्त्री बूढा र बामदेब पुत्र हरिशसंगको संयुक्त ब्यापारमा समेत पुगेर जोडिन्छ । बूढा र हरिश मिलेर चाईनाबाट सामान आयात, यार्सागुम्बाको खरीद बिक्री र हिमाली भेगमा ठेक्का पटटा गर्छन । नागपोखरीमा रहेको व्यापारीक फर्म र ओटुमा रहेको गोदामबाट व्यापारीक कारोबार हुने गरेको छ ।
जित्लान बामदेवले !
बामदेवको महत्वकाँक्षा, प्रचण्डको रणनीति र राज्यमन्त्री बूढाको दोहोरो खेलकाबीच राजीनामा आउने र बामदेबले डोल्पाबाट उपनिर्वाचन लडने अहिले नै टुङ्गो भने लागेको छैन । तर बामदेवलाई बुझेकाहरु डोल्पामा उपनिर्वाचन भई छाडने ‘लख’ काट्छन । त्यसतो त डोल्पा त्यो जिल्ला हो, त्यहाँको जनमत कहिल्यै स्थिर छैन । बहुदलमा पञ्च नेता मोती पहाडीदेखि संक्रमण कालमा क्रान्तिकारी नेतृ सत्या पहाडीसम्मले त्यहाँ चुनाव जितिसेकेका छन । मोती पहाडीले त काँग्रेसबाट चुनाव जितेर टिकट नपाएपछि स्वतन्त्र उठेरै जितेर देखाइदिए । त्यसैले त्यहाँ गौतमलाई चुनाव जित्न सहज भने नभएको उनकै शुभचिन्तकहरु बताउँछन । तथापी डोल्पामा बूढाले बिपक्षी भन्दा ७० प्रतिशत बढि मत पाएर चुनाव जितेको तथ्य अगाडि सार्दै गौतमलाई गाह्रो नहुने दाबी पनि भइरहेको छ । तर गौतम डोल्पालीबीच नयाँ अनुहार हुनेछन भने बूढा जनताबीच ‘माईडियर’ छन । यसमा यार्सा ब्यापारसंग जोडिएको सिमदेखि रिचार्ज कार्ड सम्मको जुईनोको साइनो पनि छ । एउटा ब्यक्तिको लोकप्रियता अर्कोमा हस्तान्तरण हुने बिषय एकातिर अंह छ भने नेपालकै सभैभन्दा ठुलो र बिकट डोल्पा जिल्ला सात दशक पुग्न लागेका बामदेवको उमेर र स्वास्थ्यलगायतका कारणले कति अनुकुल हुन्छ ? प्रश्न कम पेचिलो छैन ।
त्यतिमात्र होईन, डोल्पाको मात्र होईन, सिङ्गो कर्णाली अञ्चलको सोझो सम्वन्ध सुर्खेत र नेपालगंजसंग छ । अहिले पनि कर्णालीका कतिपय कार्यक्रम तल तिरै हुन्छन । डोल्पाबाट बसाँई सरेर बाँके, बर्दिया झरेको जमात ठुलै छ । बाँके, बर्दियाको मान्छे असन्तुष्ट हुँदा त्यसको असर स्वतः डोल्पाको निर्वाचनमा पर्नसक्छ । गत निर्वाचनपछि देखि बाँके बर्दियामा बिग्रेको बामदेबको सम्वन्ध अझै सुध्रिसकेको छैन । प्युठान जाँदा रिसाएका बर्दियाका जनताले बामदेव डोल्पा चढेको कसरी लिनेछन त्यो भने हेर्न बाँकी छ । त्यसमाथि नेता गौतमले बर्दियाबाट निर्वाचनमा हराउन भुमिका खेलेको भन्दै पूर्व एमालेका ९३ जना होनहार र इमान्दार कार्यकर्तालाई कारबाहीको माग गरिरहेका छन् । यसमा गौतमको डोल्पा चढ्ने इच्छाले आगोमा घ्यु थप्ने काम गरिरहेको एक असन्तुष्ट कार्यकर्ता बताउँछन् ।
असन्तुष्टी यत्तिमै सकिदैन । पार्टी एकताका क्रममा बाँकेको अध्यक्ष पूर्व माओबादीले पाएकोले सचिब एमालेले पाउँदैछ । त्यसमा बामदेबले पूर्व एमालेका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिब र उपसचिबलाई बाइपास गरी जिल्ला कमिटीमै नरहेका गोपाल गिरीलाई सचिब बनाउन मरिहत्ते गरिरहेको आरोप असन्तुष्ट पक्षधरहरुको छ ।
उता बर्दियाको अवस्था पनि उस्तै छ । बाँकेमा झै बर्दियामा पनि पूर्व एमालेको भागमा परेको सचिवमा अध्यक्ष, उपसचिब दावेदार हुँदाहुदैं सचिवालयका कनिष्ट सदस्य पुर्ण शर्मालाई सचिब बनाउन गौतम लागेका छन । जबकी सचिवालय सदस्यमै पञ्चायतकाल देखि काम गरेका अरु पनि आधादर्जन आकाँक्षी छन । २०४९ सालमा गाबिस अध्यक्ष खान काँग्रेस छोडेर एमाले आएका शर्माले २०५१ सालमा मात्र पार्टी सदस्यता पाएका थिए । बाँके, बर्दियालाई असन्तुष्ट राखेर नेता गौतमले डोल्पामा चुनाव जित्ने सपना देख्नु ढुङ्गा चपाउनु सरह भएको गौतमसंग असन्तुष्ट कार्यकर्ताहरुको भनाई छ ।
भेरी र साबिक कर्णाली भनेको नेपालकै अबिकसित क्षेत्र हो । भेरी र कर्णालीले नेता गौतमबाट ठुलै आशा र अपेक्षा राखेको थियो । तर बिगत देखि नै बिकास निर्माणमा देखाएको अनिच्छा, कार्यकर्तासंग घुलमिल नगर्ने चरित्र, आम नागरिकको पहुँचबाट टाढा रहने रुची, शान सौकात र बिलासी जीबनप्रतिको मोह, पार्टी भित्रका प्रतिस्पर्धी र बिपक्षीप्रति असहिष्णु, पटकपटक निर्वाचन क्षेत्र बदलिरहने प्रवृत्ति, सत्ता र शक्तिको पछि लाग्ने चरित्रका कारण डोल्पा मात्र होईन, भेरी, कर्णाली नै नेता गौतमका लागि कठिन बन्न सक्ने एक पूर्व एमाले नेताको कथन छ । (प्रकाश खबरमा रामहरि चौलागार्इंको विश्लेषण)
२०७५ भदौ २३ शनिबार १३:२८:०० मा प्रकाशित